ဘယ်ကုမ္ပဏီက မိုဘိုင်းကို သိနိုင်မလဲ။ Androidsis
ဘယ်ကုမ္ပဏီက မိုဘိုင်းကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Nerea Pereira | 11/04/2022 17:00 | NOTICIAS
အကြိမ်များစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမည်မသိဖုန်းနံပါတ်မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ လက်ခံရရှိလေ့ရှိပြီး ၎င်းသည် အများအားဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ကမ်းလှမ်းလိုသည်ကို သင်စိတ်မဝင်စားသောကြောင့် ခေါ်ဆိုမှုကို သင်ဖြေကြားမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့် သုံးစွဲသူများစွာသည် မည်သည့် တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီကို ခေါ်ဆိုသည်ကို သိချင်ကြသည်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ ဘယ်ကုမ္ပဏီက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် မိုဘိုင်းလ်နံပါတ် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကို သင်ဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်မလဲဆိုတာကို ဒီနေ့ ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် မဖြေချင်သော သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ တခါတရံတွင် သင်သည် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် သင်နှင့် မဆက်သွယ်လိုသော ကုမ္ပဏီအကြောင်း မသိချင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ၎င်းတို့ခေါ်ဆိုသည့်ဖုန်းတွင် မည်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ကို ရှာဖွေရန် ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကို သင့်အား ချန်ထားခဲ့ပါမည်။ ဒါကြောင့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီသံသယတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် ဒီနေရာတွေကို သင်ရောက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများ. မင်းကိုခေါ်တဲ့နံပါတ်ရဲ့ အော်ပရေတာက ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာကိုလည်း ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
1 Google search လုပ်ပါ။
2 Google Phone App ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
3 စာရင်းများကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
4 ဘယ်အော်ပရေတာရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို သိနိုင်မလဲ။
Google search လုပ်ပါ။
အလွယ်ဆုံးနဲ့ အလျင်မြန်ဆုံး ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ Google search. နံပါတ်တစ်ခုက သင့်အား ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုသည့်အခါ မည်သည့်ကုမ္ပဏီက သင့်ကိုခေါ်ဆိုနေကြောင်း သိရှိရန် Google သို့ အမြဲသွားနိုင်ပြီး ၎င်းသည် လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုဖြစ်နိုင်သည့်အခါတွင်ပင်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်အား မည်သည့်ကုမ္ပဏီက ခေါ်ချင်သည်ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ ပထမသင်သည် Google ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ရပါမည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် သင်သည် နိုင်ငံကုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး စပိန်တွင် ၎င်းသည် (+34) ဖြစ်ပြီး ဤနည်းဖြင့် ရှာဖွေမှုသည် ပိုမိုတိကျမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သင်ရှာဖွေပြီးသည်နှင့်၊ စာမျက်နှာများသည် ဤနံပါတ်အကြောင်း ပြောဆိုခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာတစ်ခုတည်းဖြစ်လျှင်ပင် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
များစွာသော ကိစ္စများတွင် အသုံးပြုသူ အများအပြားသည် ဤနံပါတ်အကြောင်း ပြောဆိုသည့် ဖိုရမ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့များလည်း ရှိပါသည်။. ၎င်းသည် တယ်လီမားကတ်တင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုတစ်ခုပင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဤကိစ္စတွင် ခေါ်ဆိုမှုကို မဖြေကြားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါနံပါတ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ စိတ်မဝင်စားကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းတို့ ထပ်မံခေါ်ဆိုပါက ဖုန်းနံပါတ်ကို တိုက်ရိုက်ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခေါ်ဆိုမှုကို ထပ်မံမဖြေကြားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
Google Phone App ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Android တွင် သင့်ဖုန်းတွင် built-in အက်ပ်များစွာရှိသည်။ ယနေ့အထိ အသုံးများဆုံးသော အရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ Google ဖုန်းအက်ပ်၊ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုသည် ခေါ်ဆိုသူ ID ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဖုန်းလက်ခံသောအခါတွင် ခေါ်ဆိုနေသော ကုမ္ပဏီအမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အောက်တွင် မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဝင်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အခါတွင် ကုမ္ပဏီ၏အမည်သည် အမြဲတမ်းပေါ်လာမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အမြဲတမ်းအကူအညီကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် အဝင်ခေါ်ဆိုမှုကို ဖြေကြားလိုခြင်း ရှိ၊မရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် အလုပ်မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့်အခါတွင် ဤအက်ပ်အမျိုးအစားကို ထားရှိရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုရောင်းချင်နေတဲ့ တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဖုန်းခေါ်ရင် ယူမလား မကိုင်ဘူးလား ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ app Google Phone ၎င်းကို Android ဖုန်းအားလုံးတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် မထည့်သွင်းထားသော်လည်း ၎င်းတို့အများစုတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ လောလောဆယ်တွင် မော်ဒယ်အားလုံး သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Samsung ကဲ့သို့ တံဆိပ်တပ်ထားသော ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် ၎င်းကို အသုံးပြုရာတွင် ပြဿနာမရှိပါ။ သင့်ဖုန်းသည် အက်ပ်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပါက၊ အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ built-in identifier ပါရှိသည့် အခြားအက်ပ်များ ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းနည်းမှာ အဝါရောင်စာမျက်နှာများဖြစ်သည့် ဖုန်းစာရင်းများကို ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ အခု အိမ်မှာ စာအုပ်ကြီးကြီး ရှိမနေတော့ဘဲ တူညီတဲ့ ဝဘ်စာမျက်နှာကနေ ဖုန်းခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ နံပါတ်ကို ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် မြန်ဆန်ပြီး ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယနေ့နှင့် အချိန်အကြာကြီး ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဝါရောင် စာမျက်နှာများအပြင် ၊ ဖုန်းခေါ်တဲ့ နံပါတ် ဘယ်ကလာလဲ ဆိုတာ သိချင်ရင် လာကြည့်လို့ ရတဲ့ တခြားဖုန်း စာရင်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အချိန်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်အသုံးဝင်သော စာရင်းများ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အကြောင်း အတော်များများ သိကြမည်ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ကြည့်ရှုရန် ရွေးချယ်စရာအချို့ ဖြစ်သည်-
Dateas.com ကို စပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
Infobel.com သည် နိုင်ငံပေါင်း 60 ကျော်တွင် ရှိနေသည်။
Telexplorer.es၊ စပိန်စကားပြောကမ္ဘာတွင် လူသိများသည်။
Yelp.es၊ စီးပွားရေးလောကကို အာရုံစိုက်သည်။
အခုကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများမသိသေးတဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုအကြောင်း ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒါက ခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက် သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ သင်လက်ခံရရှိသောခေါ်ဆိုမှု၏ဇာစ်မြစ်ကိုခြေရာခံပါ။. ဖုန်းလက်ခံရရှိပြီးသည့်အခိုက်တွင် သင်သည် *57 ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ခေါ်ဆိုသူတည်နေရာကို အလိုအလျောက် အသက်သွင်းရန် ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူအနည်းငယ်သာသိသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်အလိုရှိသော အရေအတွက်ကို ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ကလာလဲ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ ရှာကြည့်ပါ။. ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းသည် ပြဿနာမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်သည် ဤအချက်အလက်ကို ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိမည်မဟုတ်သည်မှာ မှန်ပါသည်။
ဤနည်းလမ်းကိုလိုက်နာရန် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသော်လည်း၊ သင်တော်တော်များများသိကြဖွယ်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ ပြန်ခေါ်သည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုကို အသက်သွင်းခြင်းသည် တကယ်ရိုးရှင်းသောကြောင့်၊Android ဖုန်းအက်ပ်တွင် *69 ကိုနှိပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် သင်ခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို သိနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယခုအချိန်တွင် စပိန်ရှိ အော်ပရေတာ အများအပြားတွင် အလုပ်လုပ်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူများသည် ဖုန်းပေါ်တွင်မည်သူခေါ်ဆိုနေသည်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဤကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘယ်အော်ပရေတာရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို သိနိုင်မလဲ။
ဤဆောင်းပါးသည် မည်သည့်ဖုန်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အော်ပရေတာမှ သင့်အား ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအပေါ် အများအားဖြင့် အာရုံစိုက်ထားသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်သည်ရှာဖွေရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသောကြောင့် ဤအရာကို အမြဲသိရန် သင့်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။. သို့သော် စပိန်ရှိ အသုံးပြုသူများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိပြီး ၎င်းမှာ CNMC ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်သည်။
ဖြတ်. အမျိုးသားစျေးကွက်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် (CNMC)) သင်ပိုင်ဆိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်သော အော်ပရေတာအကြောင်း ဤအချက်အလက်ကို သင်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်အားဖုန်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းများအားလုံးတွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့် ဖြစ်ရပ်အများစုတွင် သင်သိရှိနိုင်စေမည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်ကိုရယူရန် သင်သည် ဤအဆင့်များကို လိုက်နာရပါမည်-
CNMC ၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့သွား၍ နံပါတ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုအပိုင်းကို ဝင်ရောက်ပါ။
အတည်ပြုကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် အဆင့်များကို အတည်ပြုပါ။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် သင့်အားခေါ်ဆိုနေသည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြုသည့် အော်ပရေတာဖြစ်သည့် အချိန်တိုအတွင်း ရှာဖွေရန် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး မြန်ဆန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပုံသေနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်း အမျိုးအစားအားလုံးတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။ ထို့ကြောင့် ဤနည်းအားဖြင့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ မတင်ပြသင့်ပါ။
ဤအချက်အလက်ကို သိရှိခြင်းသည် သင့်တွင် နှုန်းထားတစ်ခု၊ အကန့်အသတ်မရှိ သို့မဟုတ် အော်ပရေတာတစ်ဦးကို ခေါ်ဆိုခြင်းတွင် ပိုမိုမြင့်မားသောစရိတ်စက ပါဝင်နေပါက အထူးသဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက် အမြဲအသုံးဝင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဘယ်ကုမ္ပဏီက မိုဘိုင်းကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
10 ခုနှစ် ဧပြီလရဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း 2022 လုံး
ထိပ်တန်း Minecraft မျိုးစေ့ ၉ ခု